Beaver - lena izilwane ezithakazelisayo kakhulu nge enhle kakhulu "noboya". Ngenxa isikhumba kwazo okumangalisayo kuye esikhathini esidlule yamuva, base on the esengozini yokuqothulwa. Isizathu salokho abantu abangekho omkhulu nenani wahlaba beaver ukusetshenziswa kwabo izikhumba ukuze lokuthunga noboya amajazi amakhulu nezigqoko.
Okuningi izilwane ezikhuthele okunzima ukubathola, Ngenxa yokuphelelwa umsebenzi, abakwazi ukuphila, sizalwa abakhi, ezisetshenziswa njengoba namathuluzi amazinyo abo eqinile. Ngisho beaver owakwakhe okuyisibonelo nabazali. Emndenini bona matriarchy nokubusa, abhanqiwe nge zesifazane besilisa kakhulu sensitive nomunye ukukhulisa inzalo futhi ndawonye. Uma ufuna ukwazi ukuthi unakekele kwama-beaver zabo ezincane, ukufunda lesi sihloko.
Ezikhathini zasendulo, okhokho beaver waba omkhulu usayizi, namuhla inzalo akuzona ngakho omkhulu, kodwa akakwazi ngokuthi encane namagundane. beaver endala ifinyelela 1.3-1.4 m ubude nge isisindo 25-30 kg. Izinsikazi esikhulu ngobukhulu. umama Female abacabanga ngayo umndeni, kwaba esona uhlela futhi yengamele umsebenzi wokwakha ukugcwalisa pantries izinqolobane ebusika.
Beaver nemilenze dlala they nyakazo ngobubhimbi emhlabathini, kodwa emanzini abanakho belingana ukubhukuda emanzini. empumulweni Blunt, izindlebe ezincane. I noboya siqukethe ezimbili izingqimba: elingaphandle ijazi elibomvu ansundu izinwele kanye obukhulu undercoat grey. a "elingenamikhono" okunjalo uyakwazi ukuvikela isilwane amakhaza futhi ayigongobali emanzini iqhwa.
Black nqunu-beaver umsila isetshenziswa esikhundleni gwedla elawula kwamanzi. Yena nendawo flat futhi wambozwa izikali. Ukuziqhenya lezi zilwane - amazinyo. Inamandla kakhulu nokuqhubeka sikhula kukho konke ukuphila. Uma lezi namagundane ezikhuthele musa ugaye kubo nsuku zonke phezu kwezinkuni, ungeke ucabange esingakanani aye anda amazinyo abo.
Ngokulandelako, cabangela indlela lezi zilwane ezimangalisayo ezihlala zawo ngokwemvelo nendlela ama-beaver banakekele izingane zabo.
Indlela yokuphila endle
Plain-beaver kwendawo yemvelo - amanzi angenasawoti, okuyinto zizungezwe ihlathi. Kulokhu, ichibi kufanele kube ejulile, uma kuyindodana, emfuleni, hhayi echibini ke ukuba kube kancane. Ezimweni eziningi, lezi zisebenzi amanzi ukwakha idamu futhi ngaleyo ndlela ukudala izimo ezidingekayo ngokwabo. Basebenza ikakhulukazi ebusuku, emini uthanda ukuhlala emakhaya abo ngaphansi kwamanzi.
Beaver - inyama okuqina imenyu yabo siqukethe kuphela ngokhuni ukudla isitshalo. Ngesikhathi sasehlobo, bedla amahlamvu, efihlekile, amahlumela, futhi-ke, amagatsha. Ebusika, Stocking ugodo, umbhangqwana phezulu kwenza ukusebenza wonke umndeni ukuze ebusika kwaba ukudla okwanele ukuze abadala, futhi ngayo esizukulwaneni esisha. Njengoba ama-beaver banakekele izingane zabo, bese kudingeka basebenze kakhulu. Abantu abasha abakwazi ukuzinakekela kuze bazophila eduze abazali babo futhi ufunde kuwo ukuze usinde.
Indlela banakekele beaver ku amawundlu azo kusuka ekuzalweni kuya 2 izinyanga
Yokukhwelana beaver awe ebusika, lapho babe kancane umsebenzi, futhi bachitha isikhathi sabo esiningi ezindlini zabo. Ukuvundisa senzeka ngoJanuwari - Februwari. Insikazi has izingane mayelana 100 izinsuku. Ukuze kanye, ukukhanya livela kusuka 1 kuya 6 beaver.
Izingane ukubona kahle isisindo sabo imayelana 0.5 amakhilogremu. unoboya elikhona kubo kusukela ekuzalweni. Ngemva kwamakhulu amabili - izinsuku ezintathu bobryata kakade babhukuda. On umbuzo kanjani ama-beaver banakekele izingane zabo, zingaphendulwa ngokungananazi - emihle kakhulu! Umama-Beaver benomusa nabancane, kodwa ungakhohlwa ukufunda ngokugcwele ekuphileni kwabo. Ukuze accustom ukuba amanzi, izikhathi ezimbalwa zokuqala yena unamandla ibenze abutting Beaver ephasishi kwamanzi. Kodwa ngeke nje kuphela kukuzuzise, ukulimaza zesifazane abakhathalelayo ngeke kubangele siyinzalo yakhe.
Beaver izinyanga ezimbili, singasho, ungashiyi omncane critters, yokudla kwabo ubisi, ahlanze zabo "noboya coat". Ngemva izingane ukugubha ngenyanga edlule - esingunyaka nengxenye, base kancane kancane eselunyuliwe futhi ejwayele ukudla okuvamile. Okokuqala, zinikeza amahlamvu ezithambile amanzi lily futhi, ngaphezu, nayo fed ubisi lukanina. Mayelana amawundlu bazinakekela zonke amalungu omndeni, ukuvikela kanye nokuzithuthukisa lezo ukuqapha, ngakho musa zingena enkingeni.
Kanjani izilwane anakekele amawundlu (beaver): kusuka izinyanga 2 iminyaka engu-2
Ngonyaka wokuqala wokuphila bobryata bangaphansi ebhekiwe we izihlobo esezikhulile. Sikhula, basuke akhethiwe out nabantu abadala kancane kancane wafaka ku isigqi ukusebenza zokuphila. Intsha ukwazi kakhulu, ngokuvamile uthola siyongena engozini. Njengoba ama-beaver anakekele izingane zabo ngendlela sina, inzalo abasebasha uzizwe uphephile kwi insimu elalihlala umndeni.
Ngaphambi kokuphela konyaka wokuqala wokuphila namagundane abasha nesisindo-10 kg. Kuze kube kwabaneminyaka emibili ubudala baphila nabazali bazo emzini wabo. Ama-beaver umndeni liqukethe umbhangqwana umzali nenzalo yabo nyaka futhi odlule.
Kwaphela iminyaka emibili, abazali beaver ozama ukufundisa izingane konke abakudingayo ukuze abaphilayo ozimele: amadamu, izindlu, kudivayisi kwawokugcina izimpahla futhi kanjani ukugcina ukudla ebusika, kanjani ukuze bazivikele izitha zemvelo.
Lapho eneminyaka engu-amabili abaqeqeshiwe abasha be-beaver umndeni kufanele ushiye indawo. Bona zizule emhlabeni beyofuna ngababili nalo Sihlomise zabo amakhaya.
Ukunakekela izilwane zezinto eziphilayo ezihlukahlukene ngenzalo yabo
Iningi kwezilwane ukhathazekile futhi evikela nenzalo yabo ezingcono ukwedlula abanye abantu abanganaki. Njengezinye izilwane (beaver) ukunakekelwa amaphuphu azo, niyazi. Ngaphambi manje amanye amaqiniso athakazelisayo mayelana nendlela sibonakalise ukunakekelwa kwabazali ezivela kwamanye amalungu zezwe isilwane:
• Amabhubesi njalo uphelezela cub sishaywe, ubambe abaseduze naye futhi ukulawula yonke into eyenziwa yakhe.
• Indlovu ngenjabulo ngeke kwakuba ishiywe noma iyintandane ingane indlovu, futhi ngeke ukumnakekela akukho okubi kakhulu ukwedlula umama.
• Squirrel ngamunye isikhathi ngaphambi kokuthi bahamba ekhaya, ngokucophelela ezisonga up yabo izingane, ngoba bazalwa ze ngokuphelele.
• Uma kufanele ukushisa okukhulu, lo mbala zokuzivikela ikhishwe ku insikazi ubisi imvubu. Little Hippo yokudla ubisi ngokubomvu umbala.
• Uma izimo ezingezinhle for ukuzalwa komntwana, a armadillo besifazane uyakwazi ukumisa ukukhulelwa. Baby angazalwa ngisho nangemva kweminyaka 2.
Ogwini best of Greece. incazelo
Yini umqondo wegama elithi "umbuso nomphakathi"? Ingqikithi isimo nenhlalakahle